Daweynta Caburka Iyo San-Xiranka Si Dabiici Ah - Daryeel Magazine
Daweynta Caburka Iyo San-Xiranka Si Dabiici Ah
Caburku waa labada dul ee sanka ama mid ka mid ah oo xirma, waxa aanay arrintan inta badan dhacdaa marka dulka sanka gudihiisa hore uu barar ku jiro, taas oo sababta in duufku uu ku ururo sanka gudihiisa, aakhirkana ay noqoto in qofku uu si dabiici ah neefta uga qaadan kari waayo sanka. Waa mid ka mid ah sababaha caburka sanka keena, sababta bararka ku keenaysa dulka gudihiisuna inta badan waxa ay la xidhiidhaa Hargabka iyo xasaasiyadda oo uu samboorku ka mid yahay. Bararkaas marinnada neefta ee sanka ku imanayaa waa mid inta badan ku meelgaar ah, uu sanku dabiici ku soo noqdo marka hargabka ama xasaasiyaddu tagaan, haddii aanu ahayn mid ku imanaya hilib dheeraad ah oo ku yaalla una baahan in qalniin lagaga jaro ama qallooc ku jira sanqaroorka.
Waa run in caburku aanu marka hore qofka ula muuqan cillad sidaas u weyn, balse keliya diiqad iyo ciriiri ku keenaysa qofka, laakiin sidaas ma’aha, balse waa cillad u baahan in qofku uu si dhaqso ah u dabiibo, waayo waxa uu keenaa dhibaatooyin kale oo ay ka mid tahay, caabuq dhegaha ah iyo qofka oo aan hurdo raaxo leh seexan.
Haddaba, waxaan akhristayaasha la wadaagaynaa dhowr hab oo ay khubarada caafimaadku qireen in lagu yarayn karo malaxda ku ururta gudaha sanka. Waxaa muhiim ah in qofku uu ogaado in dawo-agurigan mid keliya oo aad isticmaashaa ay kugu filan tahay oo aanu macnuhu ahayn in la wada isticmaalayo, arrinta kale ee muhiimka ahina waa in aynu ogaanno in ay tahay xal ku meel gaar ah oo marka cabudhku soo noqdaba lagu celinayo, balse aanu ahayn dawo kama damays ah.
Toontu waxa ay ka mid tahay dawo guriga ugu fiican ee lagula tacaali karo caburka sanka. Toontu waxa ay liddi ku tahay fayraska, waxa aanay la dagaallantaa jeermiska iyo bakteeriyada, sidaa awgeed waxa ay si weyn u caawisaa awoodda uu jirku u leeyahay in uu la dagaalamo caabuqa ku dhaca hab-dhiska.
Habka isticmaalka: Laba ama saddex xabbo oo toon ah ku kari koob biyo saafiya ah, kadib maalin kasta hal mar cab illaa inta uu caburku tegeyo. Sidoo kale toonta cunisteedu iyada oo kelideed ah ayaa ay qofka ka yaraysaa caburka iyo raaxo xumada hurdo ee ka dhalata.
Qofka oo isku uumiya biyo kuli waa dawo guri kale oo dad badaniba yaqaannaan in ay si dhaqso ah u jebiso ama u yarayso caburka. Uumigu waxa uu yareeyaa malaxda, waxa aanu wanaajiyaa hab-sami u shaqaynta hab-dhiska neefsiga. Qofka aad u cabursan waxaa u fiican in uu ugu yaraan laba illaa afar jeer maalintii uu biyo kulul isku uumiyo.
khalka tufaaxu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha dabiiciga ee daaweeya caburka sababtoo ah waxaa uu la dagaalama bakteeriyada.
Habka: isku darso 2 malqacadood oo khalka tufaaxa ah, koob biyo kulul ah iyo malqacad malab ah. Sidaan samee maalin kasta ilaa aad ka buskoonayso caburka
Filfishu waxa ay faa’ido u yeelan kartaa yaraynta caburka iyo guud ahaanba xiran dulalka sanka. Filfisha oo la ursadaa waxa ay sababtaa hindhiso, taas oo sabab u noqota in marinnada sanku iska soo nadiifiyaan duufka ku ururay ee sanboorku keeno.
Habka: In yar oo filfil bodo laga dhigay ah ayaa lagu shubayaa sacabka gacanta, kadib waxaa lagu darayaa saddex dhibcood oo saliid macsaro ah, kadib inta la is dhex geliyo ayaa sanka la saarayaa oo dib neefta loo nuugayaa. Waxa ay keenaysaa in qofku u uaad u hindhiso, taasina waxa ay yaraynaysaa caburka.
Yaanyada oo ka mid ah khudradaha ugu badan ee cuntada lagu karsadaa, sidoo kale waxa ay dalal badan ka tahay sharaab inta la shiido sidiisa loo cabbo, waxana ay khubarada caafimaadku sheegaan in ay leedahay faa’idooyin aad u badan. Haddaba faa’idooyinka caafimaad ee yaanyada waxaa ka mid ah in lagula tacaali karo caburka sanka, gaar ahaan waxa ay suurtogelisaa in duufka iyo malaxda ku urura dulka sanku ay jilcaan kadibna soo dareeraan, taas oo ah sababta ay caburka u kaxaynayaan.
Habka: Koob tamaandho shiidan ah ayaa lagu darayaa hal malqacad oo toon la jarjaray ah iyo malqacad weyn oo liin dhanaan shiidan ah intaas ayaa dabka la isku saarayaa, marka ay karto kadibna waxaa lagu sii darayaa waxoogaa milix ah, kadib sida sharaabka caadiga ah ayaa loo cabbayaa.
Waxaa iyaduna muhiim ah in aynu ogaanno in cuntooyinka sidoodaba u kulul sida sinjibiisha, toonta, basasha, busbaaska cas iwm, haddii cuntada lagu daro in ay ka qayb qaataan yaraynta cabudhka.
Xulbadda samayskeeda waxaa ka mid ah maaddooyin si weyn ula dagaalama caabuqa, sidaa awgeed waxa ay si aad ah u yaraysaa caburka, sidoo kale xulbaddu waxa ay soo nadiifisaa gudaha hore ee dulka, waxa aanay sideedaba u yaraysaa malaxda badan ee dulka ku abuurmaysa.
Habka: Waxa aad isku dartaa malqacad ama laba malqacadood oo xulbad shiidan ah, iyo koob biyo ah, isku kari, kadib intaa qaboojiso marka ay kala fadhiisato miir, inta uu weli diirran yahayna cab. Haddii qofku uu sidaa yeelo laba ama saddex jeer maalintii, waxaa ka tegaya caburka waxa aanay sidoo kale u fiican tahay guud ahaanba caafimaadka.
Cabitaan Dabiici Ah Oo Kordhiya Tabarta Iyo Firfircoonida